Nahoana ianao no miantsoantso toy izany?
"Nitsangana Jesosy ka niantso nanao hoe : Raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanatona Ahy ka hisotro." Jaona 7:37
"Ary avy Jehovah, dia nitsangana ka niantso toy ny teo ihany hoe: Ry Samoela, ry Samoela ô! Dia namaly Samoela hoe: Mitenena, fa mihaino ny mpanomponao." 1 Samoela 3:10
Eo amin’ny zorony iray ao amin’ny efitra fandraisam-bahiny aho no miresaka moramora amin’i Ando, izay mipetraka eo anoloako. Mijery ahy izy ary mihaino ahy. Jeremia kosa erỳ amin’ny zorony iray, sondriana mamaky boky. Tsy mijery ahy izy, ary tsy mihevitra ahy hiresaka aminy. Raha mibitsibitsika aho dia tsy hahare na inona na inona izy. Noho izany aho dia niteny mafy. Atsy an’efitra indray, mihaino hira i Manantena, mametaka fihainoana amin’ny sofina. Tsy maintsy hiantsoantso aho raha te ho henony.
Omaly aho, teo an-tokonam-baravarako, dia nahatazana ilay mpifanolo-bodirindrina amiko, niomana hiampita arabe. Lalodalovana izy, ary nisy fiarakodia tsy reny, nipoitra tampoka. Niantsoantso mafy araka izay tratran’ny heriko aho, tsy maintsy nanao izay handrenesany ahy, satria niankinan’ny ainy izany. Saingy tsy azoazony aho, satria fantany fa kristiana. Somary sorena izy nijery ahy, toa miteny hoe: “Nahoana ianao no miantsoantso toy izany?” Nandroso hiampita ny arabe izy… ary tsy afaka niala azy ilay fiara!
Miteny amintsika tsirairay Andriamanitra, ary miankina amin’ny fihetsika asehontsika manoloana Azy ny fomba tsy maintsy itenenany. Tahaka an’i Ando ve aho, manoloana Azy, sa tahaka an’i Jeremia na Manantena? Ahoana ny fomba tokony hiresahany amiko?
Miteny amin’izao tontolo izao koa Andriamanitra. Tsy misy ve, ao amin’ny fihetsika feno fankahalana ataon’izao tontolo izao aminy, fanazavana tena tsotra momba ireo fampitandremana mafy alefany?
Hanao tahaka ilay mpifanolo-bodirindrina amiko ve isika, ka hanome tsiny Azy miteny mafy toy izany, ary avy eo tsy miraharaha? Aleo mihaino Azy, fa iankinan’aina izany, ary soa ho antsika no ampitandreman’Andriamanitra antsika.